Madaxweyne Farmaajo oo markale weeraray Al Shabaab | Dhacdo.com
Home Dhacdooyinka Madaxweyne Farmaajo oo markale weeraray Al Shabaab
Madaxweyne Farmaajo oo markale weeraray Al Shabaab
Maxamed C/laahi Farmaajo, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, ayaa weerar afka ah ku qaaday Shabaabka hubeysan ee dagaalka ka wada dalka, isagoona dagaalkooda ku sheegay mid bilaa ujeedo ah.
Madaxweynaha oo Jimcihii boqolaal qof Salaadda Jimcaha kula tukaday Masaajidka Isbaheysiga ee Magaalada Muqdisho, ayaa markale ka hadlay weerarkii dadka badani ku dhinteen, ee Shabaabku ku qaadeen maqaaxida Pizza House.
Madaxweynaha, ayaa sheegay in dadkaasi lagu laayay magaca Islaamka, waxaana uu su’aal ka keenay Muslimka amaba diinta qabta in dadka la’iska laayo.
“Dadkaasi waxaa lagu laayay magaca Muslimiinta. Muslimkee weeye kan qaba in dadka la laayo? In naf la xalaaleysto diintee qabta? Waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha magac xumada iyo sharaf xumada noo keenaya, oo caalamka noo tusaaya inaan nahay dad bahala ah.” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Daawo: Khudbadda Madaxweynaha